जाँदाजाँदै कुलमानले के भने?
काठमाडौं। कुलमान घिसिङले गरेको कामको जस आफुले नपाएको झोकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गरेनन् ।
२०७३ भदौ अन्तिममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएपछि आफ्नो कार्यकालमै मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गरेको जस सर्वसाधारणले कुलमान घिसिङलाई नै दिइरहेका छन् । यर्थात हो कुलमान घिसिङले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएपछि राति समेत आफैं फिल्डमा खटिएर काम गरेर कार्यकाल भित्रै मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गरे ।
उनी नियुक्ति हुन अघि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याए। केही कामका लागि क्षणिक विवादमा तानिएपनि लोडसेडिङको चरम संकट बेहोरिरहेका सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ने काम गरेको भन्दै उनको कार्यकाल सकिएपछि पनि प्राधिकरणका उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति पाउनु पर्ने आवाज सर्वसाधारणबाट उठिरहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले लोडसेडिङ अन्त्यको जस आफु तथा आफ्नो सरकारले नपाएको र घिसिङले मात्रै पाएको भन्ने झोकमा उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेनन् ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पहिलो कार्यकाल आइतबार सकिएपछि सोमबारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उनलाई पुनः दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त गर्ने अनुमान गरिएकाे थियाे । तर, गरेन । नियुक्त नभएपछि घिसिङले प्राधिकरणबाट मंगलबार विदाई भएका छन् । विदाई कार्यक्रममा उनले विशेष गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन उर्जा जल स्रोत तथा सिँचाई मन्त्री जनार्दन शर्माप्रति आभार व्यक्त गरे । त्यस्तै त्यसपछि आएका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र सबै भन्दा बढी समय सँगै रहेर काम गर्न पाएको भन्दै ओली सरकारप्रति पनि आभार प्रकट गरे ।
कुसल टीमका कारण नै अहिलेको उपलब्धि भएको भन्दै उनले प्राधिकरणसामु आगामी दिनमा समेत चुनौती रहेको बताए ।
विदाई कार्यक्रममा उनले दिएको मन्तव्यको पूर्णपाठ:
ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७३÷७४मा ८८ दशमलव१९, आव ०७४÷७५मा ८७ दशमलव ९८, आव ०७५÷७६ मा ८६ दशमलव ८२ र आव २०७६÷७७ मा ८७ दशमलव ५५ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।
प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो । प्राधिकरणको आव २०७२÷७३ सम्ममा संचित घाटा रु.३४ अर्ब ६१ करोड पुगेको थियो भने सोही वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानी थियो । एकातर्फ कहालिलाग्दो अँध्यारोले मुलुक अक्रान्त थियो भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणको घाटाको ग्राफ बढ्दो क्रममा थियो ।
लक्ष्मी पूजाका दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्यो । त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानीसहित मुलुकका प्रमुख शहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ हामी केन्द्रीत भयौं ।
लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि संचालन गरिएको अभियानबाट प्रसारण तथा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट उल्लेख्य रुपमा घटेको छ ।
४ वर्षअघि प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावटलाई घटाएर अहिले १५.२७ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
चार वर्ष अगाडि १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङ हुँदा मुलुकभित्रको कूल विद्युत खपतको करिब ३५ प्रतिशत विद्युत भारतबाट आयात भइरहेको थियो ।
तर, विद्युत खपत करिव ७५ प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आव २०७६÷७७मा कूल उपलब्ध विद्युतकोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ भने आयातको ६ प्रतिशत विद्युत निर्यात गरिएको छ । अर्को आवबाट हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेछौं ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्राधिकरणले इतिहासमा पहिलोपटक उपभोक्ताको महशुल घटाएको छ । १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ उपभोक्तालाई ईनर्जी शुल्क निःशुल्क र न्युनतम शुल्क रु. ३० मात्र तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समग्रमा ग्राहस्थ उपभोक्ताको महशुल करिव ८—९ प्रतिशतले घटाइएको छ भने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक उपभोक्ताहरुलाई लाग्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको महंगो महशुल हटाइएको छ । सामुदायिक खानेपानी, सिंचाई तथा चार्जिङ स्टेसनको महशुल घटेको छ । यस्ले गर्दा विद्युत माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आगामी दिनमा अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरिएको खिम्ती–१ र स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत सस्तोमा आउने हुँदा ग्राहकको विद्युत महशुल अझ सस्तो गर्न सकिने छ ।
लामो समयदेखि रुग्ण भएर वसेका माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, चमेलिया र कुलेखानी ३ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । निजी क्षेत्रकासहित गरी जम्मा ४५७ मेगावाटका जलविद्युत आयोजना संचालनमा आएका छन् ।
आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतिपूर्ण रहनेछ । आहिलेसम्म प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको वजार व्यवस्थापन दोश्रो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर बृद्धि गर्नु तेश्रो चुनौती रहेको छ ।
संघीय संरचना र नयाँ विद्युत ऐन अनुसार संस्थागत पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी संचालनमा ल्याउनू चौथोे चुनौती रहको छ । यी चार मुख्य चुनौतीबाहेक अन्य व्यवस्थापकीय चुनौतीहरु थपिंदै जानेछन् ।
प्राधिकरणमार्फत नेपालको उर्जा क्षेत्रमा वित्तिय सहयोग गर्नु हुने विकास साझेदार निकायहरु तथा संचयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायत स्वदेशी वित्तिय संस्थाहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
विगत चार वर्षमा हामीले गरेका प्रयासले प्राधिकरणको गरिमालाई उच्च वनाएको छ । अगामी दिनमा यसको गरिमा अझ उच्च हुंदै जाओस्, मेरो सधै नै साथ, सहयोग र समर्थन रहिरने छ ।
नेतृत्वको निरन्तरता वा परिवर्तन नियमित एवं स्वाभाविक प्रकृया हो, यसलाई हामी सवैले आत्मसाथ गर्नु पर्छ । म यसलाई बुझिदिन सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।
चीनको खानीमा फसेका श्रमिक छ दिनपछि जीवितै रहेको सङ्केत